IVision6 ihlanganisa i-Eventbrite yezimemo kanye nokuphathwa kohlu lwezivakashi | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 28, i-2017 Douglas Karr
Vision6 inokuhlanganiswa okusha nepulatifomu yobuchwepheshe bemicimbi, I-Eventbrite, ukuze abathengisi baphathe kalula izimemo zabo kanye nokuxhumana kwemicimbi. Ipulatifomu ikuvumela ukuthi:
Dala izimemo - Dala izimemo zomcimbi ezinhle, ezenziwe ngezifiso ezihlaba umxhwele izivakashi zakho.
Vumelanisa Izihambeli - Uhlu lwakho lwezivakashi lomcimbi livumelanisa ngqo kusuka ku-Eventbrite okwenza kube lula ukuxhumana kuzo zonke izigaba.
Shintsha - Setha uchungechunge ukuphatha kalula ukubhaliswa, izikhumbuzo nokuthumela umcimbi.
Ngokuvumelanisa idatha yababekhona, kulula kakhulu ukuphatha ukubhaliswa kwezivakashi nokuxhumana komcimbi. IVision6 isiza amakhasimende aqale imicimbi yawo ngezifanekiso zesimemo eziyingqayizivele ezilungele noma yimuphi umcimbi. Ngamathempulethi amaningi amahle ongakhetha kuwo, amakhasimende angathumela izimemo ezinomthelela omkhulu ngemizuzu. Umhleli wokudonsa nokudonsa wenza kube lula ukudala izimemo zobungcweti ngemizuzu, noma ngabaqalayo.
Ngemuva kokwenza umcimbi ku-Eventbrite, amakhasimende angakhetha ngokushesha umcimbi osebenzayo kumenyu eyehlayo ngaphakathi kwe-Vision6. Imininingwane yezivakashi ingeniswa ngokuzenzakalela ngokuvumelanisa kwesikhathi sangempela okuhambisana nezinguquko nokubhaliswa okusha njengoba kwenzeka. Ukuthumela ukuxhumana komcimbi onesikhathi esifanele njengokuqinisekisa, izikhumbuzi nemininingwane yosuku lomcimbi kungumoya.
Ngithandana ngokuphelele nokuhlanganiswa okusha. Njengomhleli wemicimbi yobungcweti, yenze impilo yami yaba lula kakhulu. Angikwazi ukujabula kakhulu! ULisa Renneisen, umsunguli obumbene we Izinkomfa Eziqhakazile
Ngokuhlanganisa ithikithi nokubika kanye namamethrikhi, amakhasimende angaqoqa kalula impendulo yangemuva komcimbi futhi aphule amarekhodi amasha ngonyaka ozayo. Abaphathi bemicimbi nabakhangisi bangagxila kokusemqoka kakhulu - ukudala imicimbi engalibaleka ngempela.
Amakhasimende abelokhu esicela ukuthi sengeze ukuphathwa kwemicimbi kule nhlanganisela isikhathi eside. Sijabule kakhulu ukusebenzisana nomholi wemboni onjenge-Eventbrite ukunika amandla amakhasimende ethu ukuthi akhuphule imicimbi yawo ezingeni elilandelayo. Mathew Myers, UMphathi Omkhulu Wombono6
Vakashela ikhasi le-Eventbrite le-Vision6
Tags: ukuxhumana komcimbii-imeyili yomcimbiuhlu lwezihambeli zomcimbiithikithi lomcimbiumcimbiizenzakaloukuphathwa kohlu lwezivakashiimicimbi ye-smsumbono6